Nepal - ihe na-adọrọ mmasị
Njem nleta Asia
Nepal bụ mba dị iche iche na mba Asia. O nwere ihe pụrụ iche ma bụrụ ihe e ji mara ya, n'agbanyeghị na ya na India gbara agbata obi. Na okwu, mba a kwesịrị nlebara anya, ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ gị.
Ezigbo mmasị banyere Nepal
Ka anyị lee otú Nepal si dị mma maka ndị njem, ma chọpụta ihe ndị na-adọrọ mmasị banyere mba ahụ. N'isiokwu a, anyị gbalịrị ịnakọta ihe kachasị amasị ma dị iche iche, na ihe ị nwere ike izute ebe a na ihe ka mma iji dịrị njikere n'ọdịnihu:
Ọnọdụ akụ na ụba. Nepal bụ otu n'ime obodo kachasị azụ na ndị kasị daa ogbenye n'ụwa. Nke a na-akọwa site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghi uru bara uru, ịnweta oké osimiri, nakwa site n'ogo dị ala nke mmepe nke alaka ndị ahụ dị ka ọrụ ugbo, ụgbọ njem ,
Ndị bi. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị obodo ahụ bụ ndị bi n'obodo nta. N'obodo, ihe dị ka pasent 15 nke ndị mmadụ na-ebi ndụ, nke dị ọbụna karịa na mba nke Afrika.
Ọkọlọtọ nke Nepal dị nnọọ iche na flags nke mba ndị ọzọ nke ụwa: ya akwaaji nwere 2 triangles, na site na omenala ndoro.
Ihe ngosi ndị mmadụ. Nepal bụ naanị obodo n'ụwa ebe ọnụ ọgụgụ ụmụ mmadụ na-adị ndụ karịa afọ ndụ nwa agbọghọ.
Ugwu . Obodo kachasị ugwu na ụwa bụ Nepal: ihe dị ka pasent 40 nke ógbè ya dị n'elu akara nke 3000 mita n'elu elu igwe. Na mgbakwunye, elu nke ugwu ndị a (8 nke 14) karịrị 8000 m n'etiti ha, ugwu kachasị elu n'ụwa bụ Everest (8848 m). Dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, onye ọ bụla njem nleta nke iri, na-achọ inweta mmeri Mount Everest, nwụrụ. Ndị mmadụ rutere n'elu nwere ike iri n'efu na Rum Doodle Cafe, nke dị na Kathmandu , ruo na njedebe nke ụbọchị ha.
Ụgbọ njem ụgbọelu. A na-ewere ọdụ ụgbọelu Nepalese Lukla dịka ihe kachasị njọ n'ụwa . Ọ dị na 2845 m., Na ya runway dị n'etiti ugwu, n'ihi ya, ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọ ala adịghị adaba na nyocha mbụ, ohere maka nke abụọ ga-adị.
Ọrụ. Ọtụtụ n'ime ndị nwoke na-arụ ọrụ na njem nleta. Ha bụ ndị nduzi, ndị na-ebu ibu, ndị osi nri, wdg.
Di iche iche di iche. Na Nepal, e nwere mpaghara mpaghara ihu igwe niile - site na ebe okpomọkụ na mbara igwe.
Omenala okpukpe. Dị ka India, na Nepal, ehi bụ anụ dị nsọ. A machibidoro iji anụ ya maka nri.
Nri. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị obodo ahụ bụ ndị anaghị eri anụ, nri nri kwa ụbọchị nke mba Nepalen dị obere.
Ike ọkọnọ. N'ihi na enweghi ike inweta ego, obuna n'ime obodo ndi mmadu na enwere ike eletrik, mgbe mgbe ndi mmadu na-achikota ya. N'ihi nke a, Nepale malitere ụbọchị ha n'isi ụtụtụ, ha na-agbalịrị ịrụ ọrụ ahụ tupu ọdịda anyanwụ. Enweghị igwe kpo ọkụ ọ bụla ebe a, ọ dịkwa oyi na ụlọ na oyi.
Ụdị omenala . A na-ewere aka ekpe na Nepal dị ọcha, ya mere ha na-eri nri, buru ma jee ozi naanị n'ebe a. Na-emetụ isi nke ndị Nepale na-ekwe ka ndị mọnk ma ọ bụ ndị nne na nna, n'ihi na ndị ọzọ enweghị njedebe a. Ya mere, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị ghara ịnagide mmetụta uche na, dịka ọmụmaatụ, ka ị ghara ịkụda ụmụaka ndị Nepale n'isi.
Enweghi ike nke ndi mmadu. Ọnụ ọgụgụ nke mba ahụ ka na-ekewa n'ime castes, na mgbanwe site na ibe ya agaghị ekwe omume.
Ụdị ezinụlọ. Na Nepal, a nabatara otu nwanyị, na n'ebe ugwu nke mba ahụ, n'ụzọ dị iche, polyandry ga-ekwe omume (ọtụtụ di site na nwanyị).
Kalịnda nke Nepal dị iche na ọkwa ụwa niile: anyị 2017 ebe a kwekọrọ n'afọ 2074.
Ọgba nke Malaysia
Laos - omenala na omenala
Mmiri mmiri na Maldives
Cambodia - mmiri mmiri
Njem na South Korea
Maldives - alakụba
Myanmar - ememe ezumike
Ịgba ụgbọ ala na Japan
Ụgbọ njem Laos
Ebe obibi nke Malaysia
Akwụ n'ime ite
Kedu otu esi eme ka mmiri ara araba bawanye?
Ebumnuche eze: megide nwunye Harry Prince, ihe na-amasị ya
Uwe eji ezumike si na viscose
Ọgwụgwọ nke nsia dysbiosis na ndị okenye - ọgwụ ọjọọ
Pyometra na nkịta - mgbaàmà
Ohere maka ụmụaka
Ikewapụ mmiri swimwear taa
Kedu ihe iji mee Oxford?
Onye a hụrụ n'anya na onye nnyemaaka Catherine Boyd ghọrọ nwunye Josh Brolin
Enwere ike iji mmiri mmiri mee ihe n'okporo ámá?
Nzọụkwụ mbụ nke hemorrhoid
Akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị - Ezumike 2014
Ọgwụgwọ pharyngitis na ọgwụ ndi mmadu
Enwere ịhụnanya n'ebe dị anya?
Gịnị mere nwatakịrị ji na-arọ nrọ?
Ịkwanye ihe oriri na mkpuchi
Sea-buckthorn - bara uru Njirimara
Russian ala Jaketị